14 Tirakoob lagu caddeeyo Suuqgeynta Mawduuca | Martech Zone
Sabti, Sebtember 28, 2013 Axad, Sebtembar 29, 2013 Douglas Karr
Waxaan inta badan la shaqeynaa dadka waawayn ee dhibaatada ka haysata fahamka faa'iidooyinka suuq-geynta waxyaabaha. Waxay ku xayeysiin karaan warbaahinta dhaqameed ama waxay wadaan iibinta koox aad u fiican oo ka baxsan. In kasta oo aynaan sinnaba uga soo horjeedin taas, maalgashiga ayaa aad uga duwan. Xayeysiinta, dhagaystayaasha waxaa iska leh qof kale adiguna waxaad bixinaysaa lacag qaali ah si aad uhesho dhagaystayaashaas. Adigu ma tihid maamulka ama isha lagu kalsoon yahay, iyagu waa. Iibinta dibedda, kharashkaagu wuxuu u dhigmaa mugga iibka aad jeclaan lahayd. Iibinta badan waxay u baahan tahay dad badan (ama dad qaali ah).
Suuqgeynta mawduucyada ayaa aad ugu eg maalgashi kasta oo dhaqaale oo aad sameyn laheyd. Qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira ama isdhexgalka ayaa ah kayd loo iibsaday mustaqbalkaaga. Markaad kobciso suuqgeyntaada, maalgashigu wuu korayaa. Bil kasta, waxaad haysataa waxyaabo badan oo dheeraad ah oo ku shaqeynaya magacaaga si aad u dhisto kalsooni, amar iyo dhagaystayaashaada ama bulshadaada. Muddo ka dib, bulshada lafteedu waxay bilawday inay ka shaqayso dantaada wadista iibka xitaa inbadan.
Xaqiijinta maalgashiga muddada-dheer waxay u baahan tahay xoogaa tirakoobyo adag, in kastoo, iyo Smart Insights ayaa intaas ku dhammaysay. Soo degso hagitaan iyo tusaale u sameynta kiiska ganacsiga ee maalgashiga suuq geynta dijitaalka ah habab tiro badan - iyo sida loogu guuleysto doodaha shucuurta, sidoo kale. Waa kuwan qaar ka mid ah tirooyinka taageeraya ee ay ururiyeen:
Tags: Content Suuqmaalgashiga suuqgeynta waxyaabahasababaynta suuqgeyntasababaha suuqgeynta